Translations by YinMayOo (ယဉ်မေဦး) in “Burmese (my) translation ...” : Burmese (my) : Template “empathy” : Precise (12.04) : Translations : empathy package : Ubuntu
Translations by YinMayOo (ယဉ်မေဦး)
Translations by YinMayOo (ယဉ်မေဦး) in...
YinMayOo (ယဉ်မေဦး) has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.
1 → 50 of 753 results First • Previous • Next • Last
The error message was: %s
ချို့ယွင်းမှု အကြောင်းကြားစာမှာ - %s
တည်းဖြတ် -> အကောင့်များ
telepathy-salut not installed
telepathy-salut ကို ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ထားခြင်း မရှိပါ
ရွေးထားသော အဆက်အသွယ်မှာ ဖိုင်များကို လက်မခံနိုင်ပါ။
There was an error while importing the accounts.
အကောင့်များကို တင်သွင်းစဉ်တွင် ချို့ယွင်းမှု ဖြစ်ခဲ့သည်။
There was an error while creating the account.
ယူသွင်းစေလိုသည့် အကောင့်များကို ရွေးချယ်ပါ
အကောင့်အသေးစိတ်များကို စိစစ်ရာတွင် ချို့ယွင်းမှု ဖြစ်ခဲ့သည်။
You can either go back and try to enter your accounts' details again or quit this assistant and add accounts later from the Edit menu.
အကောင့် အသေးစိတ်များကို ပြန်ကြိုးစား ထည့်သွင်း / သို့ ထွက်သွား နိုင်သည်
The selected contact is offline.
ရွေးထားသော အဆက်အသွယ်မှာ လိုင်းပြင်ပရောက်နေသည်။
Yes, I'll enter my account details now
ဟုတ်၊ အကောင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အခုရိုက်သွင်းပါမယ်။=
You are about to createanew account, which will discard your changes. Are you sure you want to proceed?
သင်ပြောင်းလဲထားသည်များကို ဆက်မသုံးမည့် အကောင့်အသစ်ကို သင်ဖန်တီးတော့မည်။သည်တိုင်းဆက်သွားဖို့ သေချာပါသလား?
ပရိုတိုကော ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ခြင်း မရှိ
Import your existing accounts
ရှိထားသော အကောင့်များကို ထည့်သွင်းပါ
No, that's all for now
Yes, import my account details from
ဟုတ်၊ အကောင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ယူသွင်းပါ
ဟင့်အင်း၊ အနီးအနားရှိ အခု လိုင်းပေါ်ရောက်နေသူများကိုသာ မြင်ချင်တယ်။
Do you have any other chat accounts you want to set up?
နောက်ထပ် ပြင်ဆင်လိုသော အခြား စကားပြောအကောင့် ရှိပါသလား
ဆက်သွယ်သူစာရင်းကို စီစဉ်ရာတွင် သုံးဖို့အချက်အလက် ရွေးရန်။ပုံသေအားဖြင့် ဆက်သွယ်သူ၏ အမည် အတိုင်း စီစဉ်သည်။ဆက်သွယ်သူစာရင်းကို အခြေအနေ အတိုင်း စီစဉ်မည်။
အခြား စကားပြောအကောင့် ထပ်ဖန်တီးချင်ပါသလား?
ဘယ်လို စကားပြောအကောင့် အမျိုးအစားများ ဖန်တီးချင်ပါသလဲ?
ဟင့်အင်း၊ အကောင့်အသစ် လိုချင်ပါတယ်
အကောင့် အသေးစိတ်အချက်များ ထည့်သွင်းပါ
_Open new chats in separate windows
_O စကားပြောဝင်းဒိုးများ ခွဲဖွင့်ပါ
Contact goes online
ဆက်သွယ်သူ လိုင်းပေါ် ရောက်လာသည်
_P ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များ
Set your presence and current status
သင် ရောက်နေရာ နှင့် လက်ရှိအခြေအနေကို သတ်မှတ်ပြပါ
ဆက်သွယ်ရန် အမည် -